Monday December 20, 2021 - 17:04:30
Hoggaanka kooxda fallaagada Tigreega ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan TPLF ayaa ku dhawaaqay in ay ciidamadooda kala baxayaan gobollada Amxaarada iyo Cafarta.
Farriin uu hoggaamiyaha Tigreega Debretsion Gebremichael uu udiray 'Q.Midoobay' ayuu ku sheegay in ciidamadiisa uu amar kusiiyay in ay kasoo baxaan gobollada Amxaarada iyo Cafarta wuxuuna arrinkaas u sababeeyay sidii loo bilaabi lahaa wadahadallo nabadadeed.
Hoggaanka TPLF ayaa ka qeylla dhaamiyay diyaaradaha Drone-ka ee duqeymaha ugeysanaya shacabka rayidka ah wuxuu si gaar ah u eedeeyay dowladda Turkiga oo taageera siinaysa melleeteriga Xabashida.
Saacado kadib markii uu warkaasi kasoo baxay TPLF ayay diyaaradaha dowladda Itoobiya duqeymo ba'an ka geysteen magaalooyin katirsan gobolka Tigray.
Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaarado Drone ah ay gantaallo ku beegsadeen magaalooyinka Maqalla iyo Alamata, wariyaal ku sugan waqooyiga Itoobiya ayaa sheegay in diyaaraduhu ay beegsadeen isku imaatinno shacbi.
Kooxda Tigreega oo dib uqabsatay magaalada istiraajiiga ah ee Lalibela.
Hoggaanka Dowladda Federaalka oo dhaleeceeyay Weerarkii lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho.